Otu Chukwu na Otu Nna - IntegritySyndicate.com
Mbido Edemede Okwukwe Otu Chineke na Nna
“Mụ onwe m bụ Alfa na Omega,” ka Onye-nwe Chineke kwuru – onye dị adị na onye dị adị na nke gaje ịbịa – Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. (Mkpughe 1:8)
N'ezie, Chineke bụ. ( Ọpụpụ 3:14 ) Ọ bụ Nna ebighị ebi nke na-adịru mgbe nile ma na-adịkwa mgbe nile elu karịa ihe nile. ( Abụ Ọma 90:2 ) Ịdị adị ya bu ụzọ e kere eke ụzọ n’ihi na ọ bụ ya sitere n’eluigwe na ụwa na ihe nile dị ndụ n’ime ya. ( Mkpughe 4:11 ) Ọ bụ site n’Okwu ya (logos) ka e ji mee ihe niile. ( Jọn 1:1-3 ) N’ezie, Chineke bụ ntọala nke iwu na usoro. (Jeremaịa 51:15) Ọchịchị Chineke bụkwa ihe ndabere sitere na ya na-esi na ya nweta ezi uche, iwu ndị sitere n'okike na omume omume n'ime ụwa. ( Ndị Rom 1:18-20 ) Eze ebighị ebi na-eji ike a na-akparaghị ókè na-achị dị ka ihe ọmụma na-enweghị nsọtụ na nzube ezi omume si dị. ( Abụ Ọma 147:5 ) Onyenweanyị nke ụsụụ ndị agha—Ọ bụ ya bụ onye nwe eluigwe na ụwa (Jenesis 14:22) Ọ bụ ezie na ihe ndị dị n’ụwa a na-agwụ, Nna dị nsọ ga-abụ onye kasị ike na nanị Chineke maara ihe mgbe nile. (Ndị Rom 16:27) N'ihi na Chineke nke na-adịghị anwụ anwụ bụ ihe a na-apụghị ibibi ebibi - dị nsọ mgbe nile, ọ dịghịkwa agbanwe agbanwe n'ime ya. ( Jems 1:17 ) N’ịbụ nke zuru okè ruo mgbe ebighị ebi na nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, ikike nke okwu ya na-adịru mgbe ebighị ebi. (1 Samuel 2:2)
Site n’ike ya na amamihe zuru oke, Chineke kere eluigwe na ụwa. (Jeremaịa 51:15) Ọ bụ nna nke ihe a kpọrọ mmadụ, ebe o ji otu ọbara mee mba nile nke mmadụ. (Malakaị 2:10) N'aka ya ka ndụ nke ihe ọ bụla dị ndụ na ume nke ihe nile a kpọrọ mmadụ si bịa. (Job 12:10) “N’ime ya ka anyị dị ndụ, na-ejegharịkwa, nweekwa ndụ.” ( Ọrụ 17:28 ) Anyị na-adabere na “Nna nke ìhè,” maka ezi ihe ọ bụla. ( Jems 1:17 ) Nna nke ihe e kere eke bụ onye na-achị ma na-ekpe ikpe n’ihe niile o kere. ( Abụ Ọma 50:3-6 ) Anyị bụ ya, ọ bụ Chineke anyị, anyị bụkwa atụrụ nke ebe ịta nri ya. ( Abụ Ọma 100:3 ) Onye na-akwado ụwa si n’eluigwe lee ebe niile, marakwa ihe niile na-eme. ( Ndị Hibru 4:13 ) N’ihi na ọ dịghị ebe mmadụ pụrụ izo n’ebe Chineke na-anọghị n’ebe dị anya. (Jeremaịa 23:23-24) Mmata ya karịrị ohere na oge n'ime omimi nke ihe nile, ọbụna n'ime obi mmadụ. (Jeremaịa 17:10) Ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nile n'eluigwe na ala ma dị nnọọ elu, nanị Chineke pụrụ ịchị n'ikpe ziri ezi zuru okè. (Ndị Efesọs 4:6) Ọchịchị bụ nke Onye Okike karịrị ihe nile nke kere ihe nile. ( Abụ Ọma 9:7-8 )
Chineke bu otu. ( Deuterọnọmi 6:4 ) Ọ bụ naanị ya bụ ezi Chineke, ọ dịghịkwa Chineke ọzọ ma e wezụga ya. ( Diuterọnọmi 4:35 ) N’ihi na n’agbanyeghị na e nwere ihe ndị a sịrị na ha bụ chi n’eluigwe ma ọ bụ n’ụwa, e nwere naanị otu Chineke, bụ́ Nna, onye ihe niile si n’aka ya pụta, bụ́ onye anyị dịịrị ya. (1 Ndị Kọrint 8:5-6) Ịbụ onye kasị elu na-ewepụ ihe nile ma e wezụga otu Onyenwe anyị bụ́ onye mbụ, kasị ukwuu, kasị elu, na kasị elu. (1 Samuel 2:2) Jehova bụkwa otu n'ime onwe ya nke na-ekewaghị ekewa n'ime mmadụ na àgwà. ( Mak 10:18 ) Nke a kwekọrọ n’ụkpụrụ ahụ, sị: “Nụrụ, Izrel: Jehova bụ́ Chineke anyị, Onyenwe anyị bụ otu. + Ị ga-ejikwa obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na ike gị dum hụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya.” (Deuterọnọmi 6:4-5) N’ihi ya, anyị kwesịrị ịhụ Chineke n’anya n’ịdị n’otu nke mmadụ, n’ihe banyere Nna nanị ya dị ka Chineke Kasị Elu—Onye Pụrụ Ime Ihe Nile. (Jọn 17:1-3)
Chineke Nna anyị bụ ihe dị ndụ na-arụ ọrụ n'ụdị mmadụ na agwa. ( Ọrụ 14:15 ) Dị ka onye e si n’aka ya kee mmadụ n’onyinyo ya, Nna Chineke nwere ọgụgụ isi, nghọta, na uche. ( Jenesis 1:26 ) Chineke na-eme nhọrọ nke ọma dị ka uche ya si dị. ( Abụ Ọma 135:6 ) Ma, n’adịghị ka ihe a kpọrọ mmadụ, o zuru okè n’omume. ( Ọnụ Ọgụgụ 23:19 ) N’ezie, Nna nke Ìhè ahụ dị nsọ na onye ezi omume, na-enwe nnọọ ọdịdị dị mma. ( Abụ Ọma 33:4-5 ) Ọ bụ nnọọ onye ezi omume na n’ụzọ zuru okè na-ahụ n’anya. (1 Ndị Eze 8:23) Ezi omume na ikpe ziri ezi bụ ntọala nke ocheeze ya. (Deuterọnọmi 32:4) Ọ bụ ezie na Chineke zuru okè, ọ bụghị nanị ezi ụkpụrụ, ụkpụrụ, ma ọ bụ iwu omume— kama ọ bụ Nna dị ndụ nke na-eji ekworo chọọ mmekọrịta ịhụnanya n’etiti ụmụ ya. ( Ọpụpụ 34:14 ) A na-egosipụta n’ụzọ miri emi n’amata ya dị ka mmadụ site n’amamihe ịhụnanya o gosiworo n’omume ebere, obiọma, na amara. ( Ọpụpụ 34:6 ) Onye na-ekwesị ntụkwasị obi na onye eziokwu egosipụtawo ezi uche ya n’ebe ihe e kere eke nọ. ( Jems 1:17 )
Nna anyị nke nọ ugbu a nile maara ihe nile banyere anyị, ma anyị amaghị ihe banyere Chineke nke “a na-apụghị ịhụ anya.” ( Diuterọnọmi 29:29 ) Chineke abụghị mmụọ nke anụ ahụ́ na ọbara, kama ọ bụ ihe a na-apụghị ire ure. ( Luk 24:39 ) Ọ dịghị mmadụ ọ bụla hụtụrụla Nna ahụ na-anaghị anwụ anwụ anya. ( Jọn 1:18 ) O bi n’ìhè a na-apụghị ịbịaru nso n’eluigwe, ndị mmụọ ozi ya sikwa n’elu lelie anya. ( Abụ Ọma 113:5-6 ) N’ezie, ọ bụ ihe na-apụghị ịta ahụhụ mmadụ ịhụ Chineke n’ebube ya nile ka ọ ghara ịnwụ n’ihu Onye Nsọ. ( Ọpụpụ 33:23 ) N’otu aka ahụ, ọ dịghị mmadụ pụrụ ịghọta izuzu nke Chineke ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-anwụ anwụ apụghị inyocha onye ahụ na-enweghị ọgwụgwụ ma ọ bụ nweta amamihe nke onye ahụ na-adịru ebighị ebi. ( Abụ Ọma 145:3 ) N’agbanyeghị nke ahụ, ọ nọ n’ebe nile, anya ya dịkwa n’ebe ọ bụla, a pụkwara ịmata ya ma ànyị ga-achọrọ ya ọsọ. ( Ọrụ 17:26-27 ) A pụrụ ịchọta Chineke ma ọ bụrụ na e ji aka dị ọcha na obi dị ọcha chọọ ya n’ezi omume. ( Diuterọnọmi 4:29 ) Ọdịmma nke ndị ohu ya na-egosi ihu ya na-atọ Nna m ụtọ ụtọ ma na-azọpụta ndị nile na-atụ egwu ya ma na-agbaso eziokwu. ( Abụ Ọma 41:12 ) Ịtụ egwu Jehova bụ mmalite amamihe. ( Abụ Ọma 111:10 ) Otú ọ dị, Chineke chigharịrị ihu ya ma zonarị ndị ajọ omume. ( Diuterọnọmi 31:16-17 ) Otú ọ dị, ọ dịghị ihe ngọpụ maka ekweghị ekwe ebe ọ bụ na a pụrụ ịhụ Chineke nke ọma site n’ihe ndị e meworo. Ịma mma, usoro, na ịdị ukwuu nke eluigwe na ụwa, gụnyere ihe ndị e kere eke dị n'ime ya, na-ezo aka n'ịdị adị nke Chineke. ( Ndị Rom 1:19-20 ) Iwu omume, bụ́ nke e dekọrọ n’ime obi mmadụ, na-agbakwa akaebe na Chineke bụ eziokwu. ( Ndị Rom 2:14-15 ) Ọ bụ ezie na ọ pụtara ìhè n’ihu nke iwu, n’usoro, na omume, Chineke ahụ “a na-adịghị ahụ anya” na-ekpughekwa onwe ya n’ahụmahụ mmadụ, e jikwa àmà dị iche iche mara ya nke ọ hapụworo n’elu ihe e kere eke na site n’ọtụtụ ndị àmà na ihe ịrịba ama, Nna egosipụtawo onwe ya kemgbe ọtụtụ afọ. ( Ọrụ 14:17 ) Ọ bụ ya kpughe g usoo usoo usoo usoo usoo ( 6 kwa-kwadoro . Na njedebe nke oge, Chineke gosipụtara amamihe na ịhụnanya ya n'ụzọ bụ́ isi site n'aka Ọkpara ya Kraịst Jizọs (Yeshua, Mesaịa ahụ) ebe ọ nọchitere anya Nna ya nke ọma n'igosipụta àgwà ya, ikwupụta eziokwu ya, na ime uche ya. (Jọn 45:47-2) Akwụkwọ Nsọ bụ ihe ndekọ bụ́ isi nke Chineke, iwu ya, otú o si mesoo mmadụ ihe, na ihe àmà nye nwa ya nwoke. (3 Timoti 16:XNUMX)
Nna na-egosipụtakwa onwe ya site na Mụọ Nsọ ya nke e nyere site na Jizọs na mmezu nke Oziọma ahụ. (Ọrụ 2:33) Mmụọ Nsọ bụ ume nke Chineke - àgwà ọma ya na ike ya a pụrụ ibufefe nke na-emetụta ụwa na ndụ dị n’ime ya. ( Job 33:4 ) N’ịbụ ndị na-enweta site n’ike na amamihe na-enweghị nsọtụ nke Chineke, Mmụọ Nsọ bụ ihe dị nsọ nke e si n’elu ebute ya. N'ịbụ mgbatị elu nke Chineke nke Nna na-etinye onwe ya n'ime ụwa nkịtị anyị, enwere ike ịsị na Mmụọ Nsọ bụ "mkpịsị aka" nke Chineke. (Luk 11:20) Mgbe ndị kwere ekwe juputara na Mmụọ nke Chineke, ha na-arụ ọrụ Chineke dịka uche ya siri dị. ( Luk 4:18 ) Mmụọ nsọ na-enye eziokwu, amamihe, ndụ, na ike. (Aịsaịa 11:2) Mmụọ ahụ na-agbanwe, na-eme ka ọ dị ọcha, na-akasikwa ya obi (Ndị Rom 1:4). Site na Mmụọ ya, Chineke kere eluigwe na ụwa. ( Jenesis 1:1-2 ) Sitekwa na Mmụọ Nsọ, Chineke esiwo n’ọnụ ndị amụma kwuo okwu. (2 Pita 1:21) Ebe Chineke bụ mmụọ nke na-ekpughe onwe ya site na mmụọ nsọ, ndị na-efe ya aghaghị ime otú ahụ n'ime mmụọ na n'eziokwu; Nna ya na-achọ ndị dị otú ahụ ka ha na-efe ya. (Jọn 4:23-24) Iji hụ alaeze Chineke, a ga-amụrịrị mmadụ ọzọ site na Mmụọ Nsọ. (Jọn 3:5-6) Onyinye nke Mmụọ Nsọ bụ nkuchi anyị dị ka ụmụ ya nke Nna ya ji elekọta ndụ anyị. (Ndị Rom 8:14-15)
Tupu oge ochie amalite, ebe ọ matara ihe niile, Chineke zubere site n'okwu ebighị ebi ya (logos) Oziọma nke akara aka mmadụ na-agaghị abụ na ọ bụ ọnwụ, kama na site n'ezi omume nke okwukwe mmadụ nwere ike nweta ihe nketa nke ndụ ebighị ebi. (2 Timoti 1:8-9) Ndokwa a bụ maka ndị nile ga-ahọrọ inyefe onwe ha n’aka Kraịst ya n’ikwesị ntụkwasị obi n’ime uche ya. ( Jọn 5:26 ) A na-azọpụta anyị site n’amamihe Chineke nke e gosiri n’Oziọma, ebe a na-achịkọta eziokwu na ịhụnanya n’ụzọ na-eme ka e debe iwu ya zuru okè ka anyị wee site n’okwukwe gbaghara anyị mmehie. ( Abụ Ọma 130:3-4 ) Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu, ọ chọkwara ka mmadụ nile chegharịa n’ihe ọmụma nke eziokwu ahụ. (1 Timoti 2:4) Chineke bụ ịhụnanya. (1 Jọn 4:16) Ma n'ịhụnanya ya, ọ pụghị imebi iwu na ụkpụrụ nke ya. ( Abụ Ọma 89:34 ) Ọ bụ ezie na Nna Dị Nsọ chọrọ ka ọ dịghị onye ga-ala n’iyi nakwa na a ga-azọpụta mmadụ nile, ọ ga-emesịa tụkwasị ikpe ya n’isi ajọ omume na nnupụisi nile. (Ndị Rom 11:22)
Ikpe ikpeazụ sitere n'aka onye ahụ bụ onye na-achị eluigwe na ala. ( Abụ Ọma 9:7-8 ) Ọ dịghị ihe na-ezighị ezi ga-anọgide na-agaghị ata ntaramahụhụ. ( Jeremaịa 17:10 ) Eluigwe na ụwa ga-emekwa ka ha maa jijiji ọzọ. Naanị ihe na-adịghị emebi emebi ga-anọgide. ( Ndị Hibru 12:26-27 ) A ga-eji ọkụ kpee ụwa ikpe. (Aịsaịa 66:16) Ma, dị ka Chineke bụ ọkụ na-erepịa ihe, a ga-ebibi ndị iro nile nke Chineke na nke Kraịst ya (2 Pita 2:4-6). A ga-ekewapụ ndị ezi omume n’ebe ndị ajọ omume nọ, ndị ajọ omume ga-adịkwa ka igbogbo ọka n’ọkụ. ( Mkpughe 21:8 ) Site n’aka Jizọs, bụ́ onye ọ họpụtara, Chineke ga-ekpe ụwa ikpe n’ezi omume. ( Ọrụ 17:31 ) N’ikpeazụ, mgbe e bibisịrị ọchịchị na ike ọ bụla na-emegide Kraịst, Chineke ga-abụ ihe nile n’ihe nile. (1 Ndị Kọrint 15:28) N'agbanyeghị mmegide nile, okwu ebighị ebi ya ga-emezu n'ezie. (1 Pita 1:24-25)
Onye-nzuzu ekwuwo n'obi-ya na ọ dighi Chineke di. ( Abụ Ọma 14:1 ) Ndị a na-ebighị úgwù n’obi na ntị na-eguzogide mmụọ nsọ. (Ọrụ 7:51) N'ime mpako nke iwe ya, ndị ajọ omume na-ekwu, sị, "Chineke agaghị aza ajụjụ." ( Abụ Ọma 10:13 ) Ma, ka ụwa a na-ekpe ikpe na-ezighị ezi ugbu a, Chineke amalitelarị atụmatụ na nzube ya ikpe ụwa ikpe. ( Ọrụ 3:21 ) Ezi Chineke na-ekwe ka ihe ọjọọ na ajọ omume nọgide ruo nwa oge ka ọtụtụ ndị nwee ike nweta ndụ ebighị ebi dị ka ụmụ nke alaeze ya. A ga-esi otú a gosi amamihe ya n’ikpebi ikpe ruo mgbe a kara aka. (1 Pita 4:6) Ya mere, anyị na-ekwusa, sị: “Oge ahụ eruwo, alaeze Chineke dịkwa nso; chegharịa ma kwere ozi ọma!” ( Mak 1:15 ) N’ọgwụgwụ oge a, Chineke ga-emezu ikpe ziri ezi nile. ( Ọnụ Ọgụgụ 23:19 )